Tag: atụmatụ ịzụ ahịa ekwentị | Martech Zone
Tag: atụmatụ ịzụ ahịa ekwentị
Mobile, mobile, mobile… ike gwụrụ ya? Echere m na anyị na-arụ ọrụ na usoro mkpanaka na ọkara nke ndị ahịa anyị ugbu a - site na ịmepụta ndebiri email mkpanaka, iji jikọta isiokwu na-anabata, iji wuo ngwa mkpanaka. N'ikwu eziokwu, ekwenyere m na ụlọ ọrụ achụmnta ego na-elele anya na ntanetị ha azụ azụ ebe ọ bụ na ọtụtụ mmekọrịta na ụdị na-amalite ugbu a site na ngwaọrụ mkpanaka - ma na email, mmekọrịta, ma ọ bụ site na weebụsaịtị ha. Ndị ahịa savvy
Ekwentị mkpanaaka ga-adịrịrịrị anyịịgịị anya, mana ugbu a, ha bụ ebe nkịtị. Smartphones na-aga n’ihu ma na-enwe mmekọrịta karịa mgbe ọ bụla, ma a ka nwere ihe ọhụụ ọhụrụ na-akpali akpali maka ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ. A bịa n’ichepụta aha na ịkpọsa ngwa ahịa, ọ dị mkpa ịmata etu esi agaru ndị na-ege ntị n’ọrụ yana ndị ọrụ kọmputa maara nke ọma. Surge Digital ewepụtala infographic ọhụrụ